Wararka Maanta: Axad, Aug 1 , 2021-Madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay xiliga la qabanayo kalfadhiga 1aad ee golaha wakiilada cusub
"Fadhiga ugu horreeya ee Golaha Wakiillada dhawaan la doortay wuxuu qabsoomaya maalinta Salaasada ee ku beegan 03/08/2021, saacaddu marka ay tahay 09:00 Subaxnimo, fadhigaasina waxa uu ka qabsoomi doonaa Xarunta Golaha Wakiillada ee Caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland" ayaa lagu yidhi digreetada.
Tan iyo markii Maxkamada Sare ee Somaliland ku dhawaaqday natiijada rasmiga ah ee doorashada golaha wakiilada Somaliland 7 bishii July ee sanadkan 2021 oo muddo 24 cisho ahi kasoo wareegtay, waxa aad loo sugayay xiliga uu qabsoomayo kalfadhiga 1aad ee golaha wakiilada ee cusub.
Mudada 24 cisho ah ee kasoo wareegtay ku dhawaaqista maxkamada waxaa socday loolan adag oo xisbiyada mucaaradka oo dhan ah iyo xisbiga talada haya ee Kulmiye ay ugu jireen hanashada shirgudoonka golaha wakiilada cusub ee Somaliland, waxayna labada dhinac ku jireen kala xod xodashada xildhibaannada.
Xildhibaano ka mid ah isbahaysiga mucaaradka Somaliland, ayaa madaxweynaha ugu baaqay in uu soo dadajiyo qabsoomida kalfadhiga 1aad ee golaha wakiilada cusub, waxana jiray qaar kood oo madaxweynaha ku eedeeyay in uu dib u riixayo kal fadhiga ilaa iyo xisbigiisu helo aqlabiyad u saamaxda in uu ku guulaysto shirgudoonka.
6 cisho ayaa wali ka hadhsan 30 maalmood oo uu dastuurku madaxweynaha siinayo in uu ku qabto kalfadhiga 1aad ee golaha wakiilada oo laga bilaabayo maalinta Maxkamada Sare ku dhawaaqdo natiijada rasmiga ah, madaxweynaha ayaana awood dastuuri ah u leh qabashada kalfadhiga 1aad ee golaha.